स्वदेशमै रोजगारी सम्भव होला ? | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार स्वदेशमै रोजगारी सम्भव होला ?
on: २७ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०५:५७ पाठक विचार
स्वदेशमै रोजगारी सम्भव होला ?
अहिलेको सरकारले ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने दाबी गरेको छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर नेपालीहरूले मरूभूमिमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले नै यो देश चलेको छ । यस्तोमा हरेक सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गरी युवालाई यहीँ रोक्ने उद्घोष बारम्बार गरेका छन् । सरकारले जति ठूला कुरा बताए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । मलिला फाँटहरू बाँझो रहने क्रम थपिइरहेको छ । यस्तोमा अहिलेको सरकारले गरेको दाबी पनि पत्याउन सक्ने आधार छैन । हो, सरकारले कडा प्रतिबद्धताका साथ काम ग¥यो भने यहीँ रोजगारी दिन नसकिने भने होइन । मुख्य कुरा नेपालमा श्रमप्रति सम्मानको दृष्टिकोण पाइन्न । काम गर्नेप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्ने र काम नगरी खानेलाई प्रगति गरेको ठान्ने नेपालीहरूको मानसिकताका कारण पनि वैदेशिक रोजगारी बढेको हो । अहिलेको सरकारको आयु ५ वर्षका लागि ढुक्कसँग छ । त्यसैले यो सरकारले चमत्कारै गर्छ भन्ने हामी धेरैको विश्वास छ ।
अहिलेको सरकारलाई स्रोतको अभाव छ भनिन्छ । तर, स्रोत नभई पनि रकम वितरण र विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन हुने गरी बजेटमा स्रोतलाई ख्याल नगरी रकम विनियोजन गर्ने चलन विगतमा पनि थियो । यही भएर बजेट कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय तहमा पुग्दा त्यहाँबाट वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घन शुरू हुन्छ ।
बजेटको पहिलो स्रोत राजस्व हो भने दोस्रो ऋण र अनुदान हो । आन्तरिक ऋण पनि एउटा स्रोत हो । यसरी स्रोत कमजोर हुँदाहुँदै पनि ५ लाख रोजगारी नयाँ सृजना गर्ने उद्देश्य राख्नु निकै जोखीमको विषय हो । यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै कम छ । वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । यति ठूलो जनसङ्ख्यालाई कहाँ रोजगारी दिने ? अर्को कुरा, पूँजीगत खर्च हुन सको छैन । भएको पनि समयमा होइन, अन्तिममा हतारहतार बजेट सक्ने नीतिले खर्च गरिन्छ । यसको प्रतिफल पाइँदैन । काम गुणस्तरीय हुँदैन । पूँजी सृजना गर्न पूँजीगत खर्च हुनु आवश्यक हुन्छ । गतवर्ष बूढीगण्डकी, फाष्टट्र्याक र निजगढ विमानस्थललगायत आयोजनाको रकम खर्च हुन सकेन । आगामी आर्थिक वर्षमा पूँजीगत पैसा सबै खर्च होला भनेर विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन ।
बजेटले आर्थिक विकास ८ प्रतिशत पु¥याउने भनेको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने हो भने देशभित्रको उत्पादन बढाउनुपर्छ । मौसमअनुकूल भएकाले कृषि उत्पादन सकारात्मक होला भन्न सकिन्छ । तर, यसको योगदान घट्दै गएको छ र घट्नु पनि पर्छ किनभने विकास भनेकै क्रमशः कृषिबाट उद्योग र उद्योगबाट सेवा व्यवसायतिर लम्कनु हो भन्ने कुरा अन्तरराष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ । तर, हामीकहाँ उद्योगको विकास हुने छेकछन्द देखिन्न । व्यापारबाट पैसा कमाउन सकिने भए पनि किन कसैले उद्योग खोलिरहोस् । उद्योग खोल्नु भनेको नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाएजस्तै हो भन्ने कतिपय उद्योगहरू नै बताउँछन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य कारणले बढी प्रभावित हुन्छ । डलरको मूल्य, मुद्रास्फीति, तेलको मूल्य आदिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ । भारतको कारणले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ । भारतमा महँगी बढ्दासाथ हामीकहाँ पनि महँगी बढ्छ । यस्तोमा हामीले यतिउति रोजगारी सृजना गर्छौं भनेर भन्नु सही जस्तो लाग्दैन । अहिलेको सरकारले आशा जगाउने र सपना देखाउने भन्दा बढी केही काम गरेको छैन । यसो गर्नु नराम्रो त होइन तर काम केही पनि नगर्दा जनतामा चाँडै नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । अर्को कुरा, अबका जनतालाई शब्दजालमा फसाएर राख्न सकिन्न । त्यसैले गफ ठूलो हैन, काम ठूलो गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छु ।
बालाजु, काठमाडौैं ।